Wararkii ugu danbeyey Weerarkii Xarunta wasarada Arimaha gudaha iyo Amniga Soomaaliya | Puntland Vision
Wararkii ugu danbeyey Weerarkii Xarunta wasarada Arimaha gudaha iyo Amniga Soomaaliya
July 7, 2018 By News Desk Leave a Comment
Waxaa wali warar kaladuwan ay kasoo baxayaan Qarax ka dhacay xarunta wasaarada arimaha gudaha iyo Amniga Soomaaliya halkaasoo uu ka dhacay Qarax iyo Weerar is xigay.
Ilaa labo Qarax ayaa ka dhacay Xarunta waxaana sidoo kale gudaha xarunta ka dagaalamay dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab waxaana 3 Nin oo gudaha u galay uu mid kamid ah isku Qarxiyey gudaha xaruntaas.
Inta la xaqiijiyey 15 Qof ayaa ku geeriyootay oo isugu jirta Shaqaalihii wasaaradaha iyo Dad shacab ah oo ku sugnaa gudaha iyo Albaabka xaruntaasi waxaana dadka dhintay ku jira Askar ka tirsan ciidamada NISA.
Warar Hordhac ah ayaa sheegaya in weerarka lagu qaaday xarunta Wasaaradaha ay la shaqaynayeen ciidamo ka tirsan kuwa Soomaaliya ee ilaalada ka ah xarunta waxaana sidoo kale goobtaasi isaga baxsay 3 Askari oo la sheegay inay fududeeyeen Qaraxyada iyo weerarka xarunta.
Ciidamada ka tirsan dawlada Soomaaliya ayaa wali ku hawlan bad baadinta dadka ku jira gudaha xarunta oo qaar kamid ah dhismuhu ku Dumay halka ciidamo kale ay baaritaan ku hayaan sida loo fududeeyey weerarkan.
Hadal kooban oo kasoo baxay wasaarada arimaha gudaha iyo Amniga Soomaaliya ayaa lagu sheegay inay weerarkaasi qaadeen 5 Qof oo hubaysan labo kamid ahna ay ku dhinteen Qarax halka sadex Kale si toos ah ay ciidamadu u toogteen.